Soo dejisan AOMEI PXE Boot 1.5 – Vessoft
WindowsCD & DVD & USB gaariLive CD & USB gaariAOMEI PXE Boot
Bogga rasmiga ah: AOMEI PXE Boot
AOMEI PXE Boot – software ah oo loogu talagalay in ay ku shuban kombiyuutarada iyo baabi’iyo dhibaatooyinka ay ku bixisaa shabakad ka maxalliga ah. software The isku xira in computer weyn, server ie, kombiyuutarada kale iyada oo loo marayo shabakad caadi maxalliga ah iyo adigoo isticmaalaya ISO image abuuray ama deegaanka fududeeyey sida Windows PE, iyaga u saamaxaaya in ay u adeegaan. AOMEI PXE Boot waa ku weyn yahay, waayo, gurmad xogta ama dib u soo kabashada oo ka mid ah hababka ay waxyeello on mashiinada macmiilka aan drive indhaha ama USB-dekedda. software ayaa sidoo kale taageertaa loading ee beehsa oo ka mid ah kombiyuutarada duwan oo isku mar. AOMEI PXE Boot u baahan yahay isbedel qaarkood in qaabeynta BIOS of computer macmiilka ka qabashada marayo server ka.
Loading of computer iyada oo loo marayo shabakad degaanka
Isticmaalka of a Downlaods ISO-image ama deegaanka fududeeyey
Loading kombiyuutarada oo aan drives indhaha ama USB-dekedaha
loading beehsa oo ka mid ah kombiyuutarada badan
Soo dejisan AOMEI PXE Boot
Faallo ku saabsan AOMEI PXE Boot
AOMEI PXE Boot Xirfadaha la xiriira